Abakwa-Sassa sebemi ngomumo ukuholela abantu | News24
Abakwa-Sassa sebemi ngomumo ukuholela abantu
Johannesburg – UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kanye neSouth Africa Social Security Agency (Sassa) bamemezele ukuthi abantu imali yezibonelelo zikahulumeni bazoyihola ngomhlaka 3 Ephreli.
Esitatimendeni esikhishwe ngeSonto, uMnyango uthe abantu bazoholelwa ngomhlaka 3 ngenxa yokuthi umhlaka 1 Ephreli ungoMgqibelo.
“Ngenxa yokuthi umhlaka 1 Ephreli 2017 ungoMgqibelo kule sizini, njengasemhleni-ke uma ilanga lokuhola lingempelasonto, izikhungo zakwa-Sassa zisuke zivaliwe.”
Abaphathi bakwa-Sassa bazobe bekhona ezikhungweni zokuhola ukuhlola isimo nokusiza abantu abanemibuzo.
OLUNYE UDABA: Ahoxisiwe amacala abethweswe uSbu Ndebele
Ngo-2014, iNkantolo yoMthethosisekelo yathola ukuthi inkontileka yakwa-Sassa neCash Paymaster Services (CPS) ayikho semthethweni, nokusho ukuthi bekungavumelekile ukuba yelulwe, okuyinto eshiye abantu bekhathazekile bengazi ukuthi kuzokwenzakalani ngomhlaka 1 Ephreli.
Kodwa ngasekuqaleni kwenyanga ephezulu, iNkantolo yoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo sokuthi abakwa-Sassa ne-CPS babophezelekile ukuba baqhubeke nokuholela abantu ngomhlaka 1 Ephreli kuze kube kutholakale enye inkampani ezokwenza lo msebenzi.